Vaksiny? Tsidiho i Alemana tsy misy fanandramana sy quarantine, fa tsy Amerikanina sy maro hafa | Raharaham-panjakana
Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovaon'ny seranam-piaramanidina • Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Alemanina • Raharaham-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Other • Olona manao vaovao • Safety • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Vaovao momba ny fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao mivalona
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fizahan-tany an'ny governemanta sy ny sekolim-panjakana » Vaksiny? Tsidiho i Alemana tsy misy fanandramana sy quarantine fa tsy Amerikanina sy maro hafa » Page 2
Ny minisitry ny fahasalamana federaly alemanina Jens Spahn dia nanambara androany tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety federaly fa tsy ny fitsipika isam-paritra dia ny lalàna federaly manao fanamiana no lalàna any Alemanina raha ny momba ny fitrandrahana aretin-tsaina sy fitsapana ary ny fifindra-monina hafa mandritra ny areti-mandringana. Nanambara izy
Nanomboka tamin'ny 12 Mey, novain'ny governemanta federaly ny fitsipika miditra ao Alemana amin'ny teboka maro, izay midika fanamaivanana miharihary ho an'ireo mpandeha an'habakabaka. Ny olona vita vaksiny feno sy mandresy lahatra dia tsy afa-mivoaka amin'ny adin'ny quarantine sy ny andrana; na izany aza, esorina ireo faritra hafa. Rehefa miditra any Alemana avy amin'ny firenena mora ahiana ianao dia azo atao ny manao fitiliana avy hatrany amin'ny quarantine! Ireo olona vita vaksiny, mandresy lahatra ary voasedra dia tsy mila mampakatra ny porofon'ny fidirana ao amin'ny fisoratana anarana nomerika (DEA) na handefa izany any amin'ny sampana misahana ny fahasalamana. Vao tsy ela akory izay dia ekena ihany koa ny fitsapana PCR 72 ora be indrindra raha miditra any Alemana. Ho an'ireo mpandeha lavitra dia lavitra indrindra, io dia fanamaivanana raha oharina amin'ny fitsapana antigen izay mbola ekena, izay 48 ora farafaharatsiny. Ny mpandeha an-tsisintany dia tsy voatery hisoratra anarana amin'ny DEA. Ho fanampin'izany, ny lalàna mifehy ny quarantine matetika dia tsy mihatra intsony. Mihatra izao ny lalàna fanamiana manerana ny firenena. Izany dia mihatra amin'ireo firenena izay mahazo miditra alemana ihany.
Iza avela hiditra dia tsy fehezin'ity lalàna ity. Izay avela hiditra dia faritan'ny EU miaraka amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny EU. Ary hatramin'izao, io dia namela teratany firenena fahatelo UE hiditra ao amin'ny Vondrona Eoropeana lisitra fohy an'ny firenena fahatelo (lisitra fotsy) izay tsy tafiditra ao Etazonia ohatra na ao anatin'ny fepetra miavaka mihintsy.
Amin'izao fotoana izao, manodidina ny 10% amin'ireo Alemanina rehetra no vita vaksiny. Hoy ny minisitry ny fahasalamana alemanina: "Ny olom-pirenena alemanina rehetra dia hampivelatra ny COVID-19 raha tsy vita vaksiny."
Ny fitsapana COVID-19 dia tsy ilaina intsony rehefa miditra amin'ny Repoblika Federalin'i Alemana hatramin'ny rahampitso ho an'ity vondrona ity.
Nanaiky ny minisitra fa ny fanaovana vaksiny no lakilen'izao tontolo izao handresena ny COVID-19. Te hitady vahaolana izy mba hanaovana vaksiny ny olon-drehetra manerantany nefa tsy nieritreritra izy fa ny fanafoanana ny patanty no mandroso. Hoy izy: "Tian'i Shina ny hihazona ny patanty UE rehetra."